Yini eseGameni leBhulogi? | Martech Zone
Ngemuva kokufunda Izingxoxo Ezinqunu by URobert Scoble futhi Igobolondo lakwa-Israyeli, Nginqume ukwenza ushintsho kubhulogi yami. Okuphawuleka kakhulu, igama le-blog. Ibhulogi yami ibimane ithi “Douglas Karr”Ngaphambili, kepha ngenze umsebenzi othile egameni futhi ngakhetha Kuthonya Nokuzenzakalela. Ngibhalile ngakho lapha.
Ngenze izinto ezinhle ngesayithi futhi, ngisebenzisa ihluzo ngokugqame kakhulu, isithombe esisha seheda ngomgiling wami omomothekayo, nokubhekisisa okuqukethwe. Mangisho, noma kunjalo, ukuthandwa kwebhulogi kushintshe kakhulu selokhu kwaqanjwa kabusha. Ngenkathi ngangijwayele ukuthola ithrafikhi encane ngaphambili, manje ngithola amahithi amaningi.
Ngingathanda ukucabanga ukuthi umane ikhwalithi yokuqukethwe ingisizile ukudweba abafundi abaningi. Kepha njengomthengisi wedatha, ngiyabona ukuthi uma ushintsha ingxenye eyodwa yomkhankaso futhi ugcine konke okunye kufana - imvamisa ushintsho olwenzile olwenza umehluko. Kulokhu bekuqamba kabusha ibhulogi yami kube igama elithandekayo.
Vele, ukube benginegama elifana ne- URobert Scoble, Seth Godin, UMalcolm Gladwell, njll. Akudingeki ngenze noma yini ngaphezu kokunamathisela lokho njengegama lami lebhulogi. Noma kunjalo, Douglas Karr ayidumile (okwamanje). Angizange ngidayise isiqeshana esibomvu ngendlu, angizange ngikhiphe imininingwane emisha ye-CIA, futhi angizange ngithole imfihlo yobusha! Angifuni imizuzu eyi-15 yodumo, noma ngabe ngithanda ukuthi ngelinye ilanga ngibeke yonke le micabango ngokuhlangana ndawonye ngevolumu eyodwa.
Ngijabule kakhulu ukuthi iningi lenu lizovakashela. Ukugcina ibhulogi kuhlale kusemuva kwengqondo yami. Ngifunde okuningi kubantu abaningi kakhulu ukuthi ngicabanga ukuthi amabhulogi, kungenzeka, yinto enhle ukwenzeka kuwebhu.
Tags: igama le-blogmalcolm ukujabulaIgamarobert scobleuthanda uNkulunkuluIgobolondo lakwa-Israyeli
Jul 16, 2006 ku-12: 13 AM
Ingabe i-spike ayizange iqondane noSeth Godin? (Siyakuhalalisela ngaleyo BTW). Ngiyazi ukuthi akaxhumananga nesayithi, kepha ngicabanga ukuthi idlanzana labantu lizosesha igama lakho. Ngabe izibalo zikukhombisa lokhu nhlobo? Ufuna ukwazi nje….
Jul 16, 2006 ku-9: 51 AM
Ngithole ukushaywa okungu-27 kusesho lwe-doug + karr ngalo lolo suku, kodwa lutho kusukela lapho. Ngisebenzisa -Google Analytics. Ngingancoma kakhulu ukuthi ubhalise, kuyasiza kakhulu uma uzama ukulandela umkhondo nokukhulisa ukufundwa kwebhulogi lakho. Futhi, uma une-WordPress, kumane nje kuyindlela yokukopisha iskripthi kunyaweni wengqikimba yakho. Kulula kakhulu ukuvuka nokusebenza!
Ngihlala nginentshisekelo ocwaningweni oluyisisekelo lwezinguquko zokumaketha. Lokhu cishe sekuyinyanga eyodwa manje. Uye waba yini umphumela wesikhathi esimaphakathi wokuqanjwa kabusha kwebhulogi yakho?
Ngingaba nentshisekelo eshadini le-GoogleAnalytics elibuyekeziwe (kungaba ngamabili anokusatshalaliswa kwamasonto angaba yisithupha), ukubona nje ukuthi umphumela uye wacima ngemuva kwesikhashana futhi, ingabe abanye baxhumanise negama lakho elisha ngombhalo ofanayo wokuxhumanisa ( i-allinurl:…).
Ngiyethemba uzoshicilela ukulandelela.
Nakanjani ngizokugcina uthumele futhi ngizoshicilela okulandelayo. Ngisungule izinguquko eziningana kusayithi njalo. Angizange ngithembele ekuthandeni kwalokhu kufakwa kwebhulogi, noma kunjalo. Abantu abanomusa abavela Izingxoxo Ezinqunu wathatha nesithakazelo. Ngiyesaba ukuthi lokho kuzoshayela izinombolo zami kuze kufike ezingeni lapho eminye imiphumela ingahle ingabonakali yenza umehluko. Kuyinkinga enhle ukuba nayo, noma kunjalo!
Ngingaba nentshisekelo eshadini le-GoogleAnalytics elibuyekeziwe (kungaba ngamabili anokusatshalaliswa kwamasonto angaba yisithupha), ukuze ngibone ukuthi umthelela uphele ngemuva kwesikhashana futhi, ingabe abanye baxhumanise negama lakho elisha ngombhalo ofanayo wombhalo ( i-allinurl :?).
Siyabonga ngokuphawula! Ngishicilele izibalo ezimbalwa kusukela kulokhu okuthunyelwe. Ngikhuthaze ukukhula - kuze kube manje ibhulogi ilinciphise kakhulu ithrafikhi emuva ngaleso sikhathi. Izinombolo azikaze zicwilise ngezansi kwalapho zazikhona ngokubuka okubonayo ngakho-ke ngikholwa wukuthi ukushintsha igama kudlale indima enkulu.
UJun 11, 2007 ngo-3: 53 AM
ngiyabonga ngemibono yakho. Kepha kuGoogle Analytics kunesikhathi esedlule (ngamahora ama-3..mhlawumbe amahora amane) kwesinye isikhathi usuku olungu-4 mhlawumbe ..
Ngingakwenza noma yini ngakho? imayelana nendawo yesikhathi? noma ingabe inkinga yezizukulwane ngezibalo zeGoogle?
Jul 3, 2007 ku-9: 02 AM
ngicabanga ukuthi isizathu sale nkinga isikhombimsebenzisi esisha. Manje usungasebenzisa isikhombimsebenzisi esisha se-google analytics .. kubonakala kukuhle. futhi kusele amahora 3-4 kuphela.